Andriamifidisoa Zo · Febroary 2009 · Global Voices teny Malagasy
Andriamifidisoa Zo · Febroary, 2009
Lahatsoratra farany an'i Andriamifidisoa Zo tamin'ny Febroary, 2009
R.D. Kongo 24 Febroary 2009
Henika ny filazana amboletra nataona rajakobe 15 taona milanja 200 pound (90kg) tamina vehivavy mipetraka any Stamford, Connecticut, Etazonia ny haino aman-jery fantatry ny maro. Nidarodaroka ny vehivavy naman'ny tompony ihany, ka nandratra azy mafy dia mafy tokoa ilay rajakobe mpilalao sarimihetsika na dokambarotra fanao amin'ny fahitalavitra. Rajako efa lehibe...
Madagasikara: hisy ve ny fanapahan-kevitra hialana amin'ny olana?
Madagasikara 22 Febroary 2009
Fifampiresahana (sary nalain'i Avylavitra) Nanatratra ny faratampony ny herisetra politika nanomboka hatramin'nyvolana janoary teo tamin'ny 7 Febroary teo raha 30 raha kely indrindra ny Malagasy maty notifirin'ny tafika, tafiditra tao anaty fifanenjanana politika manko i Madagasikara. Maro ny diplaomaty avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena no nanao asam-panelanelanana hisian'ny fifanarahana eo amin'ny...
Afrika Atsimo 15 Febroary 2009
Madagasikara 13 Febroary 2009
Nihamatroka ny toe-draharaha teto Madagasikara hatramin'ny 26 janoary 2009 nisiana fihetsiketsehana sy fandrobana nahafatesana hatramin'ny 50. Mbola nandriaka ny ra ny andron'ny Asabotsy 07 Febroary. Tononin'ny sasany ho “Asabotsy Mena” koa noho ny nitifiran'ny mpiambina ny filoha ny mpanao fihetsiketsehana nifamorivory teo ivelan'ny lapan'Ambohitsorohitra. Nizotra ho eny an-dapa ny mpanao...
Madagasikara: Maherin'ny 25 no maty nandritra ny diabe ho any Ambohitsorohitra
Ady & Fifandirana 07 Febroary 2009
Jereo ny takelaka manokana momba ny Tolona politika eto Madagasikara. Raha kely indrindra dia 25 no voatifitra maty teto an-drenivohitr'i Madagasikara Antananarivo nandritra ny diabe politika niantsoan'i Andry Rajoelina Ben'ny tanàna, izay efa nanandra-tena ho filohan'ny fahefana avon'ny tetezamita, ny mpanaraka azy ho eny Ambohitsorohitra. Nandritra ny herinandro vitsivitsy moa...